sarin'ny fasana toa an'i Michael Jackson - toa an'i TELES RELAY
Araky ny fantatsika foana fa tsy izao tontolo izao no fonenantsika, izay midika hoe vahiny fa eto an-tany isika.
Michael Jackson izay mpihira amerikanina, mpanoratra ary mpandihy. Nantsoina matetika izy "Mpanjakan'ny pop", dia heverina ho iray amin'ireo olo-kolontsaina manan-danja indrindra amin'ny taonjato faha-XNUMX izy ary iray amin'ireo mpanakanto lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny mozika.
Teraka tao Gary, Indiana, akaikin'i Chicago izy, ny 29 aogositra 1958, valo ambin'ny folo mianadahy izy avy amin'ny fianakavian'i Jackson, fianakaviana afrikana amerikanina miasa ao amin'ny efitrano roa tao amin'ny tehezan'i Jackson Street.
Michael Jackson dia nanomboka ny asany ara-mozika niaraka tamin'ny rahalahiny sy ny fianakaviany tao amin'ny Jackson Lima tamin'ny 1964, avy eo enin-taona (6). Nitarika klioba sy bara marobe nanambana fantsona motown ny tarika.
Saingy indrisy fa tamin'ny 25 jona 2009, i Michael Joseph Jackson dia nanatevin-daharana ny razambeny tamin'ny faha-50 taonany taorian'ny niaretan'ny aretim-po tao an-tranony tao Los Angeles. Tsy nahomby ilay andrana CPR ka nentina haingana teny amin'ny hopitaly izy, ary maty izy vao maraina. Jereo ny sarin'ny fasany
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/la-tombe-de-michael-jackson-pourrait-etre-confondue-avec-une-chambre-photos/
Sarin'i Ariel Sheney mipetraka ao amin'ny Grave an'ny DJ Arafat dia miteraka hatezerana sinoa